Cudur halis ah oo amiirka Al-Shabaab laga helay, lana sheegay inuu u dhimanayo - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Cudur halis ah oo amiirka Al-Shabaab laga helay, lana sheegay inuu u dhimanayo
June 13, 2018 | Filed under: WARARKA SOOMAALIYA | Posted by: Saalax Sabriye
Nairobi (Caasimada Online) – Warar dheeraad ah oo kasoo baxayo xaaladda Caafimaad ee hoggaamiyaha Al-Shabaab Axmed Cumar ee loo yaqaan Abu Ubeiydah ayaa sheegayo inuu sii galayo xaalad halis ah oo la xaqiijiyey inuusan kasoo kaban doonin.
Wargeyska The star oo laga leeyahay dalka Kenya ayaa qoray in hoggaamiyaha Shabaab ay soo food saartay xaalad halis ah oo ay u badan tahay inuu u geeriyoodo.
Wargeyskaan ayaa shaaciyey in cudurka hoggaamiyaha Shabaab uu yahay Kansar kaga dhacay Caloosha isla markaasna ay adag tahay inuu kasoo reysto, maadaama uusan joogin meel laga heli karo xarumo Caafimaad oo cudurkaan wax looga qaban karo.
Wargeyska ayaa sheegay in hoggaamiyaha uu hadda sariir saaran yahay isla markaasna uusan awoodin inuu kaco.
Hoggaamiyaasha kale ee Shabaab ka tirsan ayuu sheegay wargeyska inay xaqiiqsadeen inuusan Abu Ubeiydah dib ugu soo laaban karin hoggaaminta kooxda ayna u badan tahay inuu geeriyoodo, midaasna waxay keentay inuu bilowdo loolan adag oo loogu jiro ciddii booskaas buuxin laheyd iyadoo ay taagan tahay khilaaf xagga Beelaha ah.
Marka laga soo tago warbixinta wargeyskaan uu qoray, waxaa jiray warar hore oo la isla dhex maray taasoo aheyd inuu hoggaamiyaha qabo cudur dhanka Kiliyaha ah, waxaana lasoo sheegayaa inay labada killi fadhiisteen.
Inkasta oo wararka qaara ay sheegaya in si xun loogu dhaawacay weerar qorsheysan, ayaa haddana ilo lagu kalsoon yahay ay xaqiijinayaan in uu ka xannuunsan yahay kilyaha. Abu Cubeydah oo markii hore ka jiranaa hal killi, ayaa hadda la sheegayaa in laba killi ay aad uga liitaan, uuna la xarbinayo noloshiisa.
Ilo-wareedyada ayaa sheegaya in Abu Cubeydah uu xanuunsanaa lixdii bilood ee ugu dambeysay, balse kooxda ay aad ugu dadaaleyso inay muujiyaan inuu wax dhibaato ah qabin.
Lama yaqaan halka uu Axmed Cumar hadda ku sugan yahay. Wararka qaar ayaa sheegaya inuun joogo degmada Jilib, halka kuwa kale ay ku warramayaan inuu gobolka Gedo ku dhex dhuumanayo.
Kooxda al-Shabaab ayaa lagu warramay in qarash badan uu uga baxayo dawada hoggaamiyahooda, taasi oo kooxda wiiqday awood ahaan inay fuliso howlgallo badan billihii ugu dambeeyey xilli ay dhaqaale ahaan liidato.
Ururka Al-Shabaab ayaa dagaal xooggan kula jiro dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM ee dalka joogo, waxaana booskaan horey uga dhintay Godane oo ahaa nin muhiim u ahaa jiritaanka kooxdaan.